China Acoustic Zvikamu Kugadzira uye Fekitori | Hongshida
1. ruzha chiratidzo bhodhi ndeye yazvino yekushongedza maitiro. Inogona kupatsanura nzvimbo nekukurumidza uye nyore. Uye ine kurira kwekudzivirira uye kupisa kupisa uye kupisa moto.
2. Iyo Acoustic Zvikamu Bhodhi inogadzirwa kubva pakakwirira simbi s / s furemu, yakakosha inogadzirwa rabha, yakanakisa kurira kwekudzivirira donje uye bhodhi rekupedzisa etc. bhodhi rekupedzisa rakapetana uye rakaoma;
3. Bhodhi yekupedzisa inoiswa munzira yealuminium, yakaunganidzwa nemavhiri mazhinji enongedzo; bhodhi rinogona kuchengetwa nenzira dzakasiyana dzakasiyana;
4. Haidi track pasi, isu tinongorembedza nzira kumatenga uye inogona kunge iri mundege imwechete nekushongedzwa kwedenga. Izvo hazvizokanganisa iyo yese yekushongedza maitiro;
5. Kumativi pebhodhi, pane ruzha rwekuvhara rubber, inogona kubatsira kupinza ruzha rwunopinda;
6. Nzira dzekuvhiya dziri nyore kwazvo, zvirinani kupfuura nzira dzekare dzaishandiswa chitubu kare;
7. Tinogona kuwedzera imwechete kana miviri mikova pabhodhi kuti zvive nyore;
8. Isu tine akawanda akasiyana kupedzisa kusangana nevatengi akasiyana chinodiwa uye uwane akasiyana ekushongedza mhedzisiro.
Isu tinogadzira akawanda marudzi eacoustic zvigadzirwa uye acoustic partitions. Fekitori yedu inovhara nzvimbo inopfuura 10000 mativi emamirimita uye yapfuura ISO9001: 2008 International Quality Chitupa, GRS Chitupa. Kusanganisira akawanda nyanzvi bvunzo bvunzo: National moto-yakatemwa bvunzo mushumo, kwezvakatipoteredza bvunzo mushumo, kurira Absorção de testgua bvunzo mushumo, etc.
Isu tine seti yakazara ye otomatiki makomputa anodzorwa michina uye nyanzvi hunyanzvi vashandi kuona chigadzirwa chedu mhando yepamusoro. Kuburitsa kwedu kweacoustic zvigadzirwa zvinopfuura mazana mana emazana emamirimita pagore uye kuburitsa kwedu kwemaitiro ekuparadzanisa masisitimu anopfuura mazana mana mazana mana emamirimita pagore. Zvinopfuura 35% zvezvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune vatengi kubva pasirese. Welcome kushanyira fekitari yedu kuvaka refu mazwi pamwe ukama.
Pashure: Acoustic Wall Panel
Acoustic Folding Chikamu
Acoustic Kupeta Chikamu Chikamu Masvingo
Acoustic Girazi Chikamu
Acoustic Hofisi Zvikamu
Acoustic Chikamu Chikamu
Acoustic Kamuri Vakaparadzanisa Chikamu
Acoustic Sliding Kupeta Chikamu